Kambani Mbiri - YTO SIMBA
YTO SIMBA inotungamira injini yedhiziri muChina uye inoshanda neChina YTO Group
PaYTO SIMBA, isu tine yedu yega yeChipo (National Technical Center) yekutsvagisa injini dzemagetsi, uye isu tine hukama hwepedyo kumatunhu epasirefu anozivikanwa masangano ekutsidzira akadai seAVL muAustria, Germany FEV kuGermany, YAMAHA muJapan neSouthwest Research Institute mu United States. Tsvagurudzo yedu nekusimba kwesimba, pamwe nebasa rakaoma revashandi vedu vane ruzivo, vanotigonesa kuenderera mberi nekugadzira yedu injini dzemagetsi.
PaYTO SIMBA, tinogadzira zvigadzirwa zvedu zvinoenderana nenyika dzepasi rose. Isu tiri ISO9000, ISO14000 uye TS-16949 yakasimbiswa, uye edu enjini dzemagetsi, anotarisirwa neUS EPA, European Emark uye CE chitupa. Nhasi, zvigadzirwa zvedu zvinotsvakwa kwazvo nevatengi nevatengi vepasirese.
Parizvino tine maviri makuru enjini yekugadzira dizili, imwe muTaizhou City, Jiangsu Province, inogadzira YD (YANGDONG) inoteedzana matatu-silinda uye mana-silinda enjini ane simba kubva 10kw kusvika 100kw, uye imwe iri muLuangang City, Henan Province, kugadzira LR uye YM inoteedzana mana-silinda uye matanhatu-silinda injini yemagetsi. Power ramg kubva ku100KW kusvika 500kw. Kuburikidza neyedu yekushambadzira network, YTO SIMBA zvigadzirwa zvave kutengeswa munyika dzinodarika zana nematunhu pasi rese.
Isu paYTO SIMBA tinotarisira kushanda nevatengi pasi rese kugadzira ramangwana riri nani! Ndokumbirawo ubate timu yedu yekutengesa kuti uwane rumwe ruzivo.